10 AMAKREZI: INTSINGISELO, INKCAZELO NOKUNYE OKUNGAKUMBI
Ukuba ufuna ukufunda malunga 10 zeekrele, intsingiselo kunye nenkcazo, emva koko uye endaweni elungileyo, kuba kweli nqaku linomdla ungafunda yonke into ngale arcana incinci imangalisayo. Uya kumangaliswa!
1 10 zeekrele
3.1 I-10 yeekrele kumgangatho waseSpain
3.2 I-10 yamakrele Tarot Marseille
3.3 I-10 yeeNkemba Tarot Rider
El I-10 yeekrele tarotIkhadi eliliqela le-arcana encinci. Abaninzi bayamoyika ngenxa yomfanekiso esiwufumanayo kuye, kodwa nangona iarchetype yakhe inomtsalane, ayisiyonto imbi leyo.
Inombolo ye-10 imele yena, lelona nani likhulu esinokulifumana kwi-Swords Swords, ebonisa ukuba kufuneka kuthathelwe ingqalelo kwimbalelwano nokutolikwa kwayo, into esiza kuyichaza ngokweenkcukacha apha ngezantsi.
El I-10 yeekrele tarot; Kwinombolo yamanani, imele inani u-10, umanyano phakathi kwe-1 efuzisela yonke, kwaye akukho nto engu-0. Ukwenza kokubini ibhalansi phakathi kokuziphatha kwethu, iinjongo zethu, ikamva kunye nokunye okuninzi.
Kwi-archetype yayo yoqobo siyayibona indoda ilele ngobuso phantsi, kwaye inamakrele amakhulu ali-10 athe nca emqolo, ikapa elibomvu ligubungela isiqingatha somzimba wayo, emazantsi omfanekiso ulwandle oluhlaza okwesibhakabhaka luphumle ngelixa isibhakabhaka ibonisa umbala omnyama, obonisa uqhwithela kwaye, emva kweentaba uyabona ilanga ukuzalwa.
Nangona sinokubona iintlungu ekhadini, singathatha ezi nkcazo zilandelayo: Iikrele ezili-10 zibonisa iingxaki, iimpazamo, inkxalabo, uloyiko, kunye nokuqukunjelwa kwemijikelo eyomeleleyo ebomini bethu.
Ulwandle nelanga zibonakala mgama, gqamisa ukuba emva kwamaxesha anzima nasemva kokuvala imijikelo, kukho ukuzola noxolo kuba ixesha nobomi buphethe ukuphilisa yonke into.
Le arcanum encinci ibonisa ukuvalwa kwemijikelezo ekungasafuneki ukuba iqhubeke kwindlela yethu, inxulunyaniswa nokuphela kwezivumelwano, ubudlelwane, iimanyano (abahlobo kunye neqabane), phakathi kwabanye. Kubalulekile ukuba ukhankanye ukuba ukutolika kunokuqaqambisa into ethile, xa idityaniswe namanye amakhadi.
Kufuneka sinikele ingqalelo kumyalezo osibonisa le leta, sivavanye yonke into esijikelezileyo (ezempilo, iqabane, abahlobo, umsebenzi, imali). Kunqande ukwenza amaphepha, ukutyikitya, ukukhathalela impilo yakho kunye nokuzihlola rhoqo, njl.
Khumbula ukuba iinkemba ezili-10 zeleta zibonisa ukuba ezi ngxaki ziye zavela njengothusayo, ngenxa yoko utshintsho olungalindelekanga, iindaba ezibuhlungu, iintlungu zomzimba ezingazange zabonwa ngaphambili, phakathi kwezinye, zinokwenzeka.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda, malunga neleta evela Ezisixhenxe zegolide, Ngenisa eli khonkco.
I-10 yeekrele kumgangatho waseSpain
El I-10 yeekrele kumgangatho waseSpain, iqala ngokubonisa ukuba ileta ayithethi ukufa i-physics, kuba ukumisela oku, ngokusebenzisa iitshathi, ezinye izinto kufuneka zibandakanywe.
Ucacisa ukuba kukho iinguqu eziyimfuneko, nangona zibuhlungu, zinokuba zezi: ukungcatsha, uqhawulo-mtshato, ukungathembani, ukusilela, ukoyiswa, uhanahaniso, ubuxoki, inkohliso, nokunye okuninzi. Kubalulekile ukuba uluqwalasele olu tshintsho, ukuze wazi indlela yokwenza kunye nokuphepha ukuwela kuxinzelelo.
Ukuba ibonakala ikwimo yayo elungileyo, ibonisa ukuba ukuphela komjikelo ongakhange usivumele ukuba siqhubeke nokuqhubela phambili kuya kufikelela esiphelweni, kwaye kufuneka siwuthathe ngenyawo lasekunene, nangona kubuhlungu kwaye kuvelisa usizi, kubalulekile ukuvumela yonke into ukuba ibaleke njengoko kufanelekile , ukuqala imingeni kunye neeprojekthi.
Ukuba ibonakala ikwimo yayo eguqulweyo, inxulunyaniswa nokudakumba, iinyembezi, ukudana. Kuya kufuneka ube nesibindi esaneleyo sokujongana nezi nguqu kwaye ucinge ukuba yonke into iyenzeka kuthi.
I-10 yamakrele Tarot Marseille
El I-10 yamakrele Tarot Marseille, Itolika amakrele njengobubi obuyimfuneko ukulinganisa utshintsho lwengqondo kunye nolwasemzimbeni. Ibonisa ukuba wonke umntu ukhululekile kwaye, ngenxa yoko, izenzo zabo azibophelelwanga nakubani na, ke ngoko, kufuneka siphile ngokwexesha elihambelana nohambo lwethu.
Ukuba ibonakala ikwimo yayo elungileyo, imele ukucaca kwengqondo okuya kufuneka sazi ukusilela okuye kwabangela amanyathelo athile ebomini bethu, mhlawumbi awabanye abantu okanye awethu (ukungcatsha nenkohliso). Konke oku kuyakusebenza ukuphuma kulo mzuzu mbi kwaye kuya kusivumela ukuba sifezekise ulungelelwaniso lwangaphakathi.
Olu tshintsho lusikhokelela ekuphakameni ngokomoya kuba, siya kuba nakho ukungena kwimeko yokubonakalisa ngokupheleleyo apho siya kuthi senze uhambo lokuzazi, oluya konyusa uthando lwakho, lubeke iinjongo ezintsha, njl.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba olu tshintsho lubalulekile kwaye luyimfuneko ebomini bethu ukusiguqula sibe ngabantu abangcono. Ufunda lukhulu kwiimpazamo nakumava, kulungile ukuthatha icala elilungileyo kuyo yonke into eyenzekayo kuthi, nokuba zibuhlungu kangakanani ezi meko.
Ukuba ibonakala ikwimo yayo eguqulweyo, emva koko ibonisa ukuba kuyakubakhona ukudideka, uloyiko, ityala kunye nokudana. Yinto eqhelekileyo, ziimvakalelo kunye neemvakalelo emva kweemeko ezingalindelekanga kwaye zomelele ezishiya simangalisiwe. Lixesha lokuba ubhenele ekuphumleni ngokwengqondo kunye nokwamkelwa kweenyani ukuqhubela phambili.
I-10 yeeNkemba Tarot Rider
Eli khadi linokubangela ukothuka kunye noloyiko, nangona le ndoda ikulo mfanekiso ifile, oko kuthetha ukuba iintlungu kunye nokubandezeleka kuphelile
Nangona lo ingumyalezo ekufuneka simnike wona, ngamanye amaxesha ukubandezeleka kunokubaxekile, kwaye apho, inani lamakrele abonwa emfanekisweni.
Umjikelo ngamnye kufuneka uphele kwaye kufuneka wamkelwe kuba bubomi. Intsingiselo ye I-10 yeeNkemba Tarot Rider, ibonisa ukuba umntu uzibaxa iimvakalelo zabo, uyabanyanzela kwaye asebenzise iqabane lakhe okanye abahlobo. Oku kunokubangela ukucaphukisa okubangela ukuphela kothando lwakho.
Xa uthetha ngemali, inokubonisa iimeko zokufikelela koko kunqwenelekayo, njengeprojekthi entsha, eyenza ukuba kufuneke ukubhenela kwimibingelelo ethile (ukuthengisa okungalindelekanga) ukuze ukwazi ukuhlawula into ngomzuzu wokugqibela, ukwenza iindleko ezingakhange kucwangcisiwe.
Kwimpilo, unokuba neentlungu ezibuya umva xa uvuka ekuseni kwaye uyolala ebusuku, unxunguphalo, ukuphoxeka kunye neengcinga ezingapheliyo. Kuyimfuneko ukuba uthathe ixesha lokuphumla kwaye uphephe la maxesha afikelela kwiimeko ezimbi, apho kuya kuba nzima ukuphuma.